200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 Heshiiskii Somaliland iyo Khaatumo oo hal qodob oo fudud u fashilmay | Shabakada Warbaahinta Times
Hargeysa (Caasimada Online) – Burbur ayaa ku yimid wadahadalladii Somaliland iyo Khatumo iyadoo 10-kii July loo ballansanaa dhamaystirka hishiiskii 16 June labadaas dhinac ku wada gaareen magaalada Hargaysa kasoo qodob ka mid ah uu dhigayey qabsoomida shirkaas oo la isla gartay in lagu qabto magaalada Burco.
Wasiiro iyo xubno ka mid ah guddiga wadahadalladan u qaabilsan Somaliland ayaa dhawaan Warbaahinta ka sheegay in Khatumo ay qaab khaldan u dhigeen shirka loo ballansanaa inuu Burco ka qabsoomo tobanka bishan.
Xubnahan oo ay ka mid ah ahayeen Gudoomiye ku xigeenka xisbiga Kulmiye Maxamed Kaahin iyo wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Yaasiin Faratoon ayaa sheegay in dib loo dhigay shirkaas lana qaban doono 24 July.
Dr. Cali Khaliif Galayd ayaa diiday dib u dhigista maamulka Somaliland uu shirkaas ku samaysay isagoo sheegay in aan lagala tashan wuxuuna intaas ku sii daray in hadduusan qabsoomin waqtigii lagu ballamay shirkaas in wadahadallada u socday iyaga iyo Somaliland uu bur bur ku imaanayo.
Xubno ka tirsan Khatumo iyo Somaliland ayaa sheegaya inay socdaan da’daallo lagu doonayo in xal la gaaro si uusan u fashilmin wadahadallada labadan dhinac oo Sagaalkii bilood ee la soo dhaafay socday.
Isimada Dhulbahante ayaa diiday ka qayb galka shirka Burco iyo guud ahaanba qodabadii ka soo baxay hishiiskii Somaliland iyo Khatumo.